हरेक अभिभावक, हेर्दै बच्चा बढ्छ र विकास रूपमा, एक समय त्यहाँ आउने बच्चालाई रेखाचित्र को मद्दतले संसार र विचार को आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न सुरु गर्दा टिप्पणी। संसारको बुझ्न यो इच्छा धेरै सकारात्मक आफ्नो पूर्ण विकास गर्न योगदान। यो शिशुलाई मा सबैभन्दा ठूलो चासो जनावर चित्रकला छ विचारणीय छ। आमाबाबुको कार्य - पूरै बच्चा को पहल समर्थन गर्न र यस गतिविधिको मूल कुराहरू सिक्ने उहाँलाई सहयोग गर्न। यस लेखमा हामी विशेष ध्यान, विशेष निर्णय, एक पाल्तु जनावर आकर्षित गर्न कसरी प्रश्न। तल केही उदाहरणहरू छलफल गरिनेछ।
आफ्नो बच्चाहरु सही पशुहरू फोटो सिकें छ, तपाईं उहाँलाई यो मदत गर्नुपर्छ। त्यो कहाँ सुरु गर्न कसरी, पशु आकर्षित गर्न व्याख्या छ। सुरुमा, आमाबाबुको कार्य - कि वा आफ्नो बच्चा इच्छा र कला को मूल कुराहरू सिक्न इच्छा बुझ्न। आखिर, कहिलेकाहीं पहिलो खराब अनुभव थप ठीक कामहरू देखि सानो मान्छे बन्द वार्ड सक्षम छ। आफ्नो बच्चा फेरि एक आफ्नो प्रिय पाल्तु जनावर को "पोर्ट्रेट" सिर्जना गर्ने इच्छा थियो, यो उहाँलाई मद्दत को थोडा लायक छ। उहाँलाई बनाउन रेखाचित्र चासो आफ्नो जनावरहरु द्वारा प्रस्तावित हुन सक्छ। यो अझै पनि आफ्नो बानी, बाहिरी सुविधा र यति मा अध्ययन गरेपछि, एक पारिवारिक मित्र हेर्न आफ्नो बच्चा साथ सँगै हुन सक्छ। पहिले कसरी जनावरहरू आकर्षित गर्न एक पेन्सिल संग कदम कदम, तपाईं यसलाई आफ्नो आज बच्चा फोटो हुनेछ जनावर के निर्णय गर्नुपर्छ। पशुहरू, पाठ्यक्रम, त्यहाँ धेरै छन्। यहाँ सबै बच्चा को इच्छा निर्भर हुनेछ। स्टार्टर्स लागि, तपाईं एक सरल तस्वीर चयन गर्न सक्नुहुन्छ। सबै छोराछोरीलाई कुकुर तर बिरालोहरु (हुनत प्रायजसो यो पहिलो बच्चाको रेखाचित्र को मनपर्ने वर्ण हो) मा रुचि छन्। तर हामी अन्य दृष्टान्तहरू विचार सुझाव। पहिलो पशु को छवि को लागि एक पेन्सिल प्रयोग गर्न राम्रो छ। पेंट्स वा मार्कर तस्वीर पाठ्यक्रम, उज्जवल बाहिर बारी हुनेछ। तर जनावर पेन्सिल नजर थप व्यावहारिक आएको र असफल लाइन सही हुन सक्छ। खैर, यो बाहेक, आफ्नो बच्चा हात को मोटर सीप विकास गर्न राम्रो सक्षम हुनेछ। त्यसैले, कसरी जनावरहरू एक पेन्सिल संग कदम कदम आकर्षित गर्न?
प्रश्न अध्ययन मा "कसरी जनावरहरू एक पेन्सिल संग कदम कदम आकर्षित गर्न" पहिलो जनावरको एक थम्बनेल छवि बनाउन हुनुपर्छ। टाउको एउटा चक्र, दुई लाइनहरु काट्ने जो रूपमा चित्रण गरिएको छ। एउटा ठाडो (सङ्केत गर्छ टोंटी) र दुई तेर्सो (denoted आँखा)। एक गोलो शरीर को रूप मा टाउको को तल भविष्य Foxes रंग, साथै खुट्टा, कान र पुच्छर रूपरेखा। त्यसपछि Zig-ZAG रेखाहरू प्रयोग गरेर बालाहरू थूथन प्रतिनिधित्व ड्र। आँखाको तहमा, माथिल्लो परेलिहरु आकर्षित र एक खुट्टा चित्रण गरिएको छ। को ठाडो रेखा को स्तर मा त्रिकोणात्मक स्याल नाक गर्छन्। यसलाई आदर आएको गाला र मुख छन्। ऊन बनावट व्यक्त गर्ने पुच्छर तल सजिलै उत्प्रेरित गर्छ कि नागबेली लाइन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईं बाँकी खुट्टा, गालामा र कान राम्रो समाप्त आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ। कृपया याद गर्नुहोस् कि कान स्पष्ट देखाइएको हुनुपर्छ, कि र पुच्छर दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। अब आवश्यक रूप मा, रबड प्रयोग गरेर सबै सहायक रेखा र स्पष्ट ड्र रूपरेखा हटाउन।
हामी एक पांडा चित्रण
हालैका वर्षहरूमा थुप्रै बच्चाहरु animated फिलिम हेर्दै दूर भयो "कुंग फू पाण्डा।" यो दृश्य, हामी अलग यो चित्र को सबै intricacies कवर निर्णय प्यारा जनावर। बस उसलाई फोटो। किनभने पांडा कालो र सेतो रंग, जनावर prettification लागि प्रयोग रंग Pencils यो मूल्य छैन। रंग वरिपरि परिदृश्य गर्न सकिन्छ: तपाईंले तस्वीरमा मानव गुण गर्नुपर्छ त, तपाईं पनि विचार गर्नुपर्छ रूखहरू, पहाड, आदि को तस्वीर पूरा हामी एक कार्टून चरित्र प्रतिनिधित्व गर्ने ... बच्चा कार्टून चरित्र मास्टर गर्न सजिलो थियो, तपाईं सुरुमा कसरी पेन्सिल सामान्य पांडा भालु आकर्षित गर्न सिक्नुपर्छ। त्यसपछि यो एक कार्टून चरित्र परिणत गर्न सजिलो छ। त्यसैले, एक गोलो तस्वीर को मद्दत पांडा को टाउको र आफ्नो शरीर संग (सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा, सही सबै अनुपात सामना)। अब एक भालु पन्जा आकर्षित। आफ्नो बच्चा तुरुन्तै वस्तु कार्यान्वयन समस्याग्रस्त छ भने, तपाईँ तिनीहरूलाई schematically फोटो गर्न सक्नुहुन्छ। पूर्ण थप prorisuete। यो नाक र कान को आकृति आकर्षित गर्न समय। यो कार्य सामना गर्न त गाह्रो छैन। मात्र सल्लाह: गर्दा रेखाचित्र पेन्सिलमा मा धेरै दबाव प्राप्त छैन। बारम्बार हटाउन र रेखाहरू धेरै ठीक गर्न कलात्मक प्रक्रिया आवश्यक छ। यो चित्र विवरण मा सार्न समय। यो कुरा मा, मुख्य कुरा हो - हाम्रो चरित्र शरीर को सबै भागहरु को सही छवि जाँच गर्नुहोस्। को संख्या मा देखाइएको यो पनि सहायक रेखाहरू हटाउन र पान्डा आकर्षित गर्न आवश्यक छ। को भालु छवि तयार हुँदा, तपाईं यसलाई prettification गर्न सक्नुहुन्छ। सबैलाई थाह छ रूपमा, थूथन पांडा मात्र आँखा, नाक र कान को क्षेत्र मा गाढा ठाउँ छ। तपाईंको नङ गर्न भालु CUB आकर्षित गर्न नबिर्सनुहोला। र पनि यसको पंजे पंजे छडी बाला मा प्रतिनिधित्व गर्न सकिन्छ, एक मनपर्ने बोट pandas छ।
हामी एक बिरालो चित्रण
कुरा कसरी जनावरहरू आकर्षित गर्न सबै आफ्नो मनपर्ने puppies र बिरालोको बच्चाहरुको दृष्टि गुमाउन छैन, बच्चाहरु को लागि। आखिर, बच्चाहरु प्राय तिनीहरूलाई देखि चित्रकला प्रक्रिया सिक्न सुरु गर्नुहोस्। त्यसैले, कसरी एक बिरालो आकर्षित गर्न पेन्सिल मा? दुई चपटे सर्कल को रूप मा टाउको र मुर्कुट्टा तस्बिर। तस्विर अझ सममित बाहिर गरिएका, हामीले ठाडो लाइन आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को चरण - आँखा को चित्रकला। तिनीहरूलाई थप expressive टोन दिन तल माथि भन्दा एकदम हल्का बनाउन। कृपया याद गर्नुहोस् कि सबै रेखाहरू एक चिल्लो संक्रमण हुनुपर्छ भनेर। एक उल्टो त्रिकोण को रूप मा, लाइन lugs र आँखा जानेछन् जो एक नाक आकर्षित। बिरालो मुख सिद्धान्त मा, एक उल्टो Us | अंग्रेजी अक्षरहरू छ रूपमा चित्रण गरिएको छ, र रहिरहन्छ सबै पशु फारमको नरम लाइनहरु समायोजन हो।
पशु शरीर दुई सर्कल, एक ठूलो (टाउको), दोस्रो साना (ट्रंक) बनेको छ। थप टाउको संकेत सर्कल भित्र, तल्लो बायाँ कुनामा गर्न अलिकति सारे छ जो केन्द्र पार सानो बाङ्गो लाइन बोक्न। त्यसपछि बिस्तारै शरीर र टाउको संयोजन। आँखा र नाक आकर्षित, हामी एक प्यारा पिल्ला प्राप्त। स्पष्ट लाइन सामना बनाउन। कान, मुख र eyebrows आकर्षित गर्न नबिर्सनुहोला। यो पुच्छर शीर्ष बाहिर टाँसिएको आकर्षित गर्न मात्र रहनेछ।
यहाँ हामी जनावर एक पेन्सिल संग कदम कदम आकर्षित गर्न कसरी प्रश्न अध्ययन गरेका छन्। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, यहाँ कुनै कठिनाइ छन्। मुख्य कुरा, कदम कदम, हाम्रो सल्लाह पालन - र आफ्नो बच्चा चाँडै मनपर्ने जनावर चित्रकला सबै intricacies सिक्न।
कसरी चरणमा एक हीरा आकर्षित गर्न। मास्टर वर्ग
गहना कला। मास्टर Jewelcrafting
Dzhon Konstebl: जीवन र अंग्रेजी परिदृश्य को मालिकको को चित्रहरु
उड्डयन संग्रहालय। Monino मा उड्डयन संग्रहालय: ठेगाना, कसरी प्राप्त गर्न
ढाँचा लामो स्कर्ट
विभिन्न सैन्य नाजी जर्मनी को Wehrmacht र एसएस मा बाँध्न
चाखलाग्दो कुरा, जबकि टुनिशिया केही समुद्र?
चलचित्र "कोबरा": अभिनेता र भूमिकाको
Aisha: नाम को मान र एक संक्षिप्त विवरण